Nagarik News - फायरफक्सविरुद्ध उत्रियो डेटिङ साइट
Friday 12 Mangshir, 2077 | November 27, 2020
फायरफक्सविरुद्ध उत्रियो डेटिङ साइट
01 Apr 2014 | 14:42pm
मङ्गलबार १८ चैत्र, २०७०
डेटिङ साइट ओकेक्युपिडले वेब ब्राउजर मोजिला फायरफक्स प्रयोग नगर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ। फायरफक्सका नयाँ सिइओ ब्रेण्डन एइच समलिङ्गी विवाहविरुद्ध रहेको भन्दै ओकेक्युपिडले नि:शुल्क आउटसोर्स ब्राउजरको विकल्पमा इन्टरनेट एक्स्पोलोरर, गुगल क्रोम र ओपेरा प्रयोग गर्न सूचना निकालेको हो।
'सिइओ एइच समलिङ्गी जोडीको समान अधिकारविरुद्धमा छन्', ओकेक्युपिडले भनेको छ- 'त्यसैले हाम्रा प्रयोगकर्तालाई मोजिला नरोज्न आग्रह गर्दछौं।'
सोसल नेटवर्किङ, फ्रेण्डसीप, इन्स्टेन्ट मेसेज सुविधा समेत भएको ओकेक्युपिडलाई प्रभावशाली डेटिङ साइट मानिन्छ। २० लाख बढी सक्रिया प्रयोगकर्ता रहेको दाबी गर्ने ओकेक्युपिड सन् २००७ मा टाइम म्यागेजिनको टप टेन डेटिङ साइटमा परेको थियो।
फायरफक्सले आरोप सत्य नभएको उल्लेख गरेको छ। 'ओकेक्युपिडले सूचना सार्वजनिक गर्नु अघि तथ्य पुष्टि गर्न सम्पर्क गरेको छैन', उसले भनेको छ- 'फायरफक्स समलिङ्गी विवाह सहित सबैलाइ समान सहयोग गर्छ।'
जाभा स्क्रिप्टका इन्भेन्टर एइच २४ मार्चदेखि ओपनसोर्स ब्राउजर फायरफक्सको नयाँ सिइओ नियुक्त भएका थिए। उनी सन् २००८ मा क्यालिफोर्नियामा भएको समलिङ्गी विवाहविरुद्धको अभियानमा सहभागी भएको आरोप ओकेक्युपिडको छ। सो अभियानलाई उनले १ हजार डलर दान गरेको आरोप लगाइएको छ।
ओकेक्युपिड अपिलले अमेरिकामा ठूलो तरंग ल्याएपछि मोजिला सिइओ एइचले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। 'मोजिला सबै लिङ्ग, उमेर, वर्ण, जाति, आर्थिक हैसियत र धर्म मान्नेहरुको खुला मञ्च हो', उनले भनेका छन्। आफ्ना कर्मचारीहरुका समलिङ्गी यौनसाथीको इन्योरेन्स सहितका सुविधा नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरिने आश्वसन पनि उनले दिएका छन्।
विश्वभरिबाट वेब ब्राउजिङ गर्नेमध्ये मोजिला चलाउने २२ प्रतिशत छन्। जर्मनी, इन्डोनेसिया, पोल्यान्डमा मोजिला सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ।
यस्तो छ ओकेक्युपिडको अपिल
वर्षका नयाँ ग्याजेट
काठमाडौं– ग्याजेटप्रेमीका लागि २०७० सालको अन्त्यतिर आएकोे 'सामसङ ग्यालेक्सी एस फाइभ' पछिल्लो उपहार हो। ७६ हजार रुपैयाँ पर्ने ग्यालेक्सी एस फाइभको चर्चासँगै २०७१ सालमा केही नयाँ ग्याजेट आउँदै छन् जुन...
ग्यालेक्सी एस–फाइभ बजारमा
काठमाडौं– सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एस–फाइभ' नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। सामसङको आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसेज (आइएमएस) ले शुक्रबारबाट यो स्मार्टफोनको बिक्री सुरु गरेको हो।
विन्डोज एक्सपी बन्द
तपाइँको कम्प्युटरमा विन्डोज एक्सपी छ? छिटो अपग्रेट गर्नुहोस्। आजदेखि माइक्रोसफ्टका नि:शुल्क सेक्युरिटी इसेन्सियल एक्सपीमा डाउनलोड हुने छैन। सिस्टम सेन्टर, विन्डोज इनट्युन, माइक्रोसफ्ट डेप्लोइमेन्ट टुलकिट पनि एक्सपीमा सपोर्ट गर्ने छैन। विश्वभरि...
मोजिला सिइओले पद त्यागे
समलिङ्गी विवाहका पक्षधरको चर्को आलोचनाका कारण मोजिला फायरफक्सका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) ब्रेण्डन एइचले पदबाट राजिनामा दिएका छन्। समलिङ्गी विवाह विरोधी उनी एक महिना अघि वेब ब्राउजर फायरफक्सको सिइओ नियुक्त भएका...
स्मार्टफोन 'आँखाको दुश्मन'
लन्डन– चस्मा निर्माणमा संलग्न विज्ञहरू(अप्टिसियन्स)ले स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोगले मानिस अन्धोसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने दुई हजार मानिसमा गरेको अध्ययनपछि यो चेतावनी सार्वजनिक गरेका हुन्।
गुगलले यसै साता स्मार्ट हातेघडी सार्वजनिक गरेको छ। सर्च इन्जिनमा एकलौटी बजार ओगटेको गुगलले हार्डवेयरमा पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन यो ग्याजेटलाई महत्वका साथ हेरेको छ। गुगलले हातेघडी सार्वजनिक गर्नुको...
एलजीको नयाँ स्मार्ट फोन आयो
काठमाडौं- एलजी ब्रान्डको नयाँ स्मार्ट फोन 'एलजी जिटू' बजारमा आएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सिजी इम्पलेक्स प्रालिले मंगलबार एलजीको जी सेरिजको पहिलो स्मार्ट फोन बजारमा ल्याएको हो।
फेसबुकको १० वर्षे यात्रा
सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चारको परम्परागत परिभाषालाई चुनौती दिन सफल फेसबुक यसै सातादेखि १० वर्षको हुँदै छ। एकतर्फी सञ्चार प्रणालीमा रहेका आमसञ्चारका माध्यमलाई पछाडि छोड्दै यो सामाजिक सञ्जालले नयाँ मोडल नै तयार...
काठमाडौं– ग्याजेटप्रेमीका लागि २०७० सालको अन्त्यतिर आएकोे 'सामसङ ग्यालेक्सी एस फाइभ' पछिल्लो उपहार हो। ७६ हजार...
काठमाडौं– सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एस–फाइभ' नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। सामसङको आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसेज...
तपाइँको कम्प्युटरमा विन्डोज एक्सपी छ? छिटो अपग्रेट गर्नुहोस्। आजदेखि माइक्रोसफ्टका नि:शुल्क सेक्युरिटी इसेन्सियल एक्सपीमा डाउनलोड हुने...
गाउँको धुले सडकमा सोलार बत्ती
भरतपोखरी (कास्की)-बिजुली आएको होस या नहोस पोखरा सहरका सडकमा उज्यालो हुँदैन। सडकको दायाँबायाँ बिजुली पोल र...